10 Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope
Europe inogara ichitiyeuchidza nezvekare Hollywood uye humambo. saka, kuputsa kweguta mune rimwe remaguta anoshamisa eEuropean kune nezvezvakanaka zvehupenyu. Kudya kwakanaka, tsika nemagariro, uye nhoroondo ine yakasarudzika yakashata uye dhizaini inotora mweya yedu kure, ndizvo zvimwewo zvezvinhu zvinoita kuti Europe irote.
Kubva kumahombekombe eNice kuenda kumatenga bar muVienna, yedu 10 zvakanakisa kuputsa kwemaguta muEurope kuchapfuura kutarisira kwako kukuru.
Chitima Kufamba Ndiyo Eco-Hushamwari Nzira yekufamba muEurope. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel neSave A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
1. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: Vienna, Ositiriya
Kana achingoitira Sachertorte, iyo yetsika chokoreti torte, iwe unofanirwa kunyatsofunga nezveVienna kune yako break break muEurope. Pakati-vhiki kana refu vhiki, Vienna inopa akawanda ekuona kuyemura uye maonero eguta ayo anotora kufema kwako kure.
Kutanga kuKahlenberg kubva kwaunogona kuona nzira yese kusvika kune Carpathians yeSlovakia. Wobva waenderera kuchitsuwa cheDanube chepikicha uye kuenda kuVienna kuenda kuFranziskanerplatz square kunwa kofi yeViennese muhodhi yepositi. Dhavhara zuva ne cocktails kuDas Loft kudenga bara uye kusanganisa pamwe nevanowanikwa.
Izvi zvinongova zvishoma zvezvimwe zvakakosha zvinhu zvekuita muVienna kana iwe uchida kushandisa guta rako kuputsa muVienna sechokwadi Viennese.
2. Colmar, Furanzi
Inowanikwa pakati peSwitzerland neGerman, padyo nenzvimbo yakanaka yeRhine muFrance, Colmar idhorobha rakacheneswa uye rakanaka. Ndokusaka guta iri rakadikidiki ndeimwe yemaguta akanakisa ekuparara muEurope. Kutenda kune hukuru hwayo uye hupfumi 1000 Nhoroondo yeEuropean iyo inowedzera kune yayo yemashiripiti mamiriro, zvirokwazvo uchawa murudo pakutanga kwekuona uye udzokere kwekugara kwenguva refu.
Iyo nguva yaunosvika muColmar unobva wanzwa sekunge wapinda mungano yevana. Nzira yakanaka yekushandisa yako break break muEurope iri kudzungaira munzira dzemumigwagwa kuenda kuVenice diki, mira for a Girazi waini, iyo Alsace inokosha.
Colmar yakanakira kuzororo rekisimusi reguta uye yakanyanya kunaka kupera kwevhiki.
Paris kuenda kuColmar neTreni
Zurich kuenda kuColmar neTreni
Stuttgart kuenda kuColmar neTreni
Luxembourg kuna Colmar neTreni
3. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: Venice, Itari
Mabhiriji, dzimba dzisina kujairika uye dzine mavara, pizza hwema uye Aperol, gadzira Venice a kurota kuenda zororo reguta muEurope. Kukura kwayo kudiki, mamiziyamu, uye kuona zvichaita kuti urambe wakabatikana kwenguva refu uye pfupi vhiki yekuenda. Kune nguva dzose piazza diki ichangotenderera pakona kubva kune yakabatikana nzvimbo, kwaunogara kumashure, vane cappuccino uye panini, kana kuzvibata iwe kuna pizza inonaka yakabikwa pachitofu chekare.
Kana urikuronga kupopota kwevhiki refu, zvitsuwa zvinoyevedza zveBurano neMurano ingori chikepe kuenda.
Padua kuenda kuVenice nechitima
Bologna kuenda kuVenice nechitima
Roma kuenda kuVenice nechitima
4. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: Zvakanaka, Furanzi
Hapana chimwe chingazorora kupfuura rwendo rwekukurumidza kuenda kuFrance Riviera pakupera kwevhiki. Rakanaka Nice nemhenderekedzo yaro inzvimbo huru yekuenda isingakanganwike zhizha guta zororo muEurope.
Cote D'Azur inzvimbo yemahombekombe emahombekombe muNice uye La Tour Bellanda haifanirwe kurasikirwa kune avo eposvo-senge maonero uye zuva ranyura. Kuputika kweguta muNice kune zvese nezvekugara kwakanaka uye kwekudyara kwakanaka. saka, vhiki yevhiki muNice ichaita kuti iwe unzwe semambo.
Matangi kuParis neTreni
Cannes yekuLyon neTreni
5. Amsterdam, Netharenzi
Chinhu chekutanga chinouya mundangariro kana munhu achifunga nezvekuputswa kweguta muAmsterdam idunhu dzvuku remagetsi, cu, canal. asi, guta iri diki reEurope rine zvakawanda kwazvo zvekupa.
Mumwaka wechirimo Amsterdam maruva ane mavara akajeka uye kwese kwaunotendeuka kunoratidzika sepositi. Canal, mabhoti, bikes, uye maruva akamirira kupenda yako albhamira yemifananidzo. Kutanga paTulip museum uye ipapo pinda muJordaan, iyo maze yemakamuri uye madiki emahotera emunharaunda, kana Oost uye Rembrandt mapaki e pikicha uye zororo.
6. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: Cinque Terre, Itari
Cinque Terre iboka ra 5 ane mavara uye nzvimbo dzinoyevedza uye zvirokwazvo ichave iri imwe yemaguta akanakisa amunotora muhupenyu hwako. Mukudonha uye munguva yechando, Cinque Terre runako rwekurara, asi muzhizha inokura senge chero guta reEurope. Chikuru mukana weCinque Terre mukuenzanisa nemaguta eEurope ndeyekuti iwe unogona nyore kufamba uye kushanyira 5 misha mune isingasviki 3 mazuva. saka, Kufamba kwechitima muCinque Terre kuri nyore uye kwakagadzikana zvekuti unogona kuenda kune chero misha isingasviki 20 maminitsi.
Kugara pamawere uye kutarisa pamusoro pegungwa nemakungwa akanaka, Cinque Terre inoshamisa. Uyezve, kune makofi mazhinji, mumaresitorendi, maonero, uye Hiking mudungwe munzira kukodzera chero kuravira. saka, kana uchida kuzorora negirazi rewaini pa minda yemizambiringa yemuno kana kukanganiswa, ipapo kuputika kweguta muCinque Terre kwakakunakira.
La Spezia kuManarola nechitima
Riomaggiore kuManarola nechitima
Sarzana kuManaarola nechitima
Levanto kuManarola nechitima
Beer minda, mapaki akasvibira, anotyisa maonero, uye madhimoni kudzungaira mukati, gadzira Prague rakakodzera guta kuputsa muEurope. Prague imba yekumaguta anoshamisa, nhoroondo, misika yemuno, uye kofi uko kwaunogona kubata kofi uye keke kuti uende uye uve nepikicha mune imwe yemapaki ayo mazhinji. wo, kune zvakawanda zvakavanzika uye zvakanaka nzvimbo yekuongorora uye kudzivirira mapoka evashanyi.
Prague inzvimbo inozivikanwa yekuputsa guta muEurope, kunyangwe ichigona kukawanda kwazvo gore rose. asi, ichiri kukosha zvachose kushanya kwevhiki pfupi. Iyo nguva yaunoburuka muchitima, uchadanana neruchiva urwu uye wakajeka guta.
8. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: kweBrussels, Bherujiyamu
Kana iwe uine zino rinotapira, iwe uchave uine zvinoshamisa guta zororo kuzororo muBrussels. Brussels ine zvakawanda zvekugovana uye kukuratidza, sekufara kwayo chenyika inozivikanwa chokoreti uye waffles. Pamusoro pe, kupfuurisa 100 mamuseum akamirira iwe muBrussels. Mushure mekushanyira zvakanakisa iwe unogona kuenda kuna rue Danseart kune kurumwa kuti udye kumaresitorendi akanakisa. Rimwe dombo muBrussels ndiyo inonakidza Nzvimbo Sainte-Catherine uye chic uye tsika Chatelain.
Brussels ichafara kukugamuchira iwe kwenguva pfupi kana refu vhiki yekubvapo. Iri iguta rakasarudzika rine runaki uye chimiro chinogona kufambiswa chero munhu chero zera ripi neripi.
Luxembourg kuna Brussels neTreni
Antwerp kuenda kuBrussels neTreni
Amsterdam kuBrussels neTreni
Paris kuenda kuBrussels neTreni
9. Hamburg, Jerimani
Guta rechipiri rakakura kwazvo kuGermany ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuzorora kweguta muEurope. Hamburg ndiyo imba kune huru doko renyika uye Inner neOuter Alster lake, kwaunogona kunakidzwa a kukwira chikepe kunoshamisa.
Planten un Blomen igadheni rine botanic rine maonero makuru nenzvimbo dzemifananidzo. saka, iwe zvirinani kurongedza kamera yako uye gadzirira mamwe makuru mapfuti kugovera kubva kune yako inoshamisa yezororo muHamburg.
Hamburg to Copenhagen neTreni
Zurich kuenda kuHamburg neTreni
Rotterdam kuHamburg neTreni
10. Kupfuura Kwakanaka Guta MuEurope: Budapest, Hangari
Chimwe chezvinhu zvakanaka zvekuita muBudapest kutora chikepe kuchidzika neDanube rwizi. Nzira yakanakisa yekuyemura guta uye zvivakwa muBudapest ndeyechikepe. Nemabasa makuru ekunze uye emukati, guta reHungary rakakwira kumusoro kwedu 10 kuputsa kwakanaka kweguta muEurope.
Kuongorora mabhiriji, shanyira echinyakare mafuta ekugezera, uye ravira iyo yeHungary cuisine zvinhu zvaunofanirwa kuita kuti unzwe sedzinogara muBudapest. wo, Ive neshuwa kushanyira Mattias chechi, Fisherman's bastion, uye Paramende yekuona kwezuva kweguta.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvechitima matiketi kune chero yakanaka nzvimbo yekuenda mabhureki auri kuronga kutora!
Iwe unoda here kubatanidza yedu blog positi "Gumi Akanakisa Mabreakunda muEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)